Akafuni ukuziqhakambisa umdlali wePirates osize bebukisa ngeMaritzburg - Impempe
Akafuni ukuziqhakambisa umdlali wePirates osize bebukisa ngeMaritzburg
February 28, 2021 Impempe.com
UThabang Monare we-Orlando Pirates
Uvele wazinuka amakhwapha wathi kunamaphutha awenzile okumele afunde kuwo yize ebenconywa ngokuthi ubesibambe kahle isisu se-Orlando Pirates uThabang Monare.
Lo mdlali uqokwe njengobevelele iBucs ibukisa ngeMaritzburg eyishaye ngo 3-1 emdlalweni weNedbank Cup ngoMgqibelo kusihlwa.
IPirates ibuye kade ilandela ngemuva ngo 1-0 yashaya amagoli amathathu esiwombeni sesibili ukuze iqhubekele esigabeni esilandelayo kwiKe Yona.
Ekuqaleni kwesiwombe sesibili, uJosef Zinnbuer ukhiphe uBen Motswari washiya uMonare yedwa esiswini kanti usibambe kahle kakhulu.
“Njengamanje ngiseqenjini elibusisiwe ngabadlali basesiswini abanethalente ngendlela yokuthi uma kuphuma omunye kungena omunye akujiki kakhulu (indlela yokudlala),” kusho uMonare ngemuva komdlalo.
“Ngiyafunda umdlalo nomdlalo futhi ngiyathuthuka kancane kancane ngoba kuhlezi kunesikhala sokwenza kangcono, ngisize iqembu. Kunamaphutha engiwenzile namuhla okumele ngifunde kuwo,” kuqhuba le nsizwa eneminyaka engu-31.
Ebuzwa ukuthi yini eshintshile le eyenze bavuka indlobane ngesiwombe sesibili nokuphethe ngokuthi bayiphuce iqatha emlomyeni iBlue Hearts, uMonare uthe kube wukufaka umdlandla othe xaxa.
“Kujike indlela yokwenza nokucabanga ngoba besazi ukuthi kubaluleke kanjani ukuwina lo mdlalo, sikwazi nokumele sikwenze. Sinethalente elimangalisayo la eqenjini bekumele sijike ukucabanga bese silwa, okuyinto esiyenzile.
“Ngiyabancoma kakhulu ozakwethu, basebenzile sidlala neqembu ebelizikhandla nokudingeke ukuthi nathi sizikhandle ngokuphindiwe esiwombeni sesibili. Sekumele siyibambe kuwo lo mgqigqo ukuya phambili,” kusho uMonare odabuka eMbalenhle, eSecunda.
Umdlalo olandelayo wePirates kuzoba ngoweligi neBloemfontein Celtic e-Orlando Stadium ngoLwesibili ntambama.
Previous Previous post: Ifuna ukuqhubeka nokuqhoboza amaqembu aseKZN iLeopards
Next Next post: UKhune unqabe inkontileka yeChiefs, usethole iqembu phesheya